रातो बाकसमै बिलाए कान्छीका खुसी :: Setopati
'ए! प्यारी सुन त मेरो भिसा आएछ नि!',श्रीमानले उनको नजिक आउँदै भने।
'हो र?',उनको आवाजमा खुसी र गम दुबै मिसिएको थियो।
'अब त म पनि विदेश जाने भएँ है', हाँस्दै थपे श्रीमानले।
'हो र तेरो भिसा आयो है'उहाँहरूको पनि खुसीको सिमाना थिएन। आफ्नै सपनामा हराउन थाल्नुभयाे। अब त हाम्रो खरको छानोमा टिन लाग्ने भयो। बाँसको टेका लगाएको खाटमा सुत्नु नपर्ने भयो। कुच्चिएको कसौडी, कराई बदल्न सकिने भयो। एकछाक खान दुःख नहुने भयो। आफ्नो छोरो विदेशमा छ भनी रमाउने दिन आउने भए। चाडपर्वमा अरूको घरमा पैँचो माग्न जान नपर्ने भयो।' आमाबुबाका थिए, यी आशाहरू।
'के भयो तिमीलाई?'श्रीमानको आवाजले उनको सोचाइ टुट्यो।
भाँडा माझेर सकिएको थियो। हात धुदै थिइन्। हात धोएर पुलुक्क हेर्दै भनिन्,'विदेश नजाँदा हुन्न र?'
'हुन त हुन्छ नि तर के गर्नु? जति गर्छु भने पनि यहाँ केही सफलता मिलेन। मिलोस् पनि कसरी वातावरण पनि हुनुपर्यो नि? यिनी कुरातिर नलागौं प्यारी अब तयारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन।'
'अब त श्रीमान छुट्टीमा आउँदै हुनुहुन्छ' भनेर कान्छीको मनमा खुसीयाली छाएको थियो।
'अब त फ्लाइट ल्यान्डिङ हुनुपर्ने हो, एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै फोन त गर्नुपर्ने भन्दै भित्तामा रहेको घडी हेर्दै उनी बेचैन भइरहेकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ९, २०७८, १८:२०:००
मलाई सरकारले बदनाम गरायो!
को हो मानव?
म के हुँ?